Qaad Bi?iye (Gurxan & Bulxan), W/Q, Axmed-Assad MURTISOOR (G&B) – Radio Daljir
Qaad Bi?iye (Gurxan & Bulxan), W/Q, Axmed-Assad MURTISOOR (G&B)
Minneapolis, Nov 28 – ?Mirqaan waa naf awoowgeed iyo asuulkeedba la gubay, oo lagu aabudhay qol billaa daaqad ah oo dhammaci ka holcayso, taasoo lagu cabudhiyay dhawr baakidh oo sigaar ah iyo tennekad bigays ah; Miriqaankaad maqasheen waa naftaa sirinsirqaysan, ee markay kob ay ka baxdo weydo indhuhu bannaanka u soo boodaan.? Ayuu ku tiraabay nin reer Somali Galbeed ah oo aanan magaciisa hayn.
Haddaba, murtidan ayaa soo gaadhay Gurxan & Bulxan (G & B) oo sidaad hore ula socoteenba ahaa laba nin oo aallaaba figradahoodu isku yihiin ?Maan Barreey & Maan Billaal?. Haseyeeshee, doorkan waxay u wada guuxeen murtidan sare ku xusun, waxayna aragtiyo isku dhaw ka muujiyeen dhibaatooyinka Qaadku keeno ee ay ka mid yihiin: